I-Pingus, umdlalo wesimbo seLimings ukuba ube nexesha elimnandi | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPingus. Yi le Umdlalo wepuzzle we-2D osimahla kunye nomthombo ovulekileyo weGnu / Linux, Windows kunye neMacOS, esele ineminyaka ubudala. Ngexesha lomdlalo kuya kufuneka sikhokele amaqela amakhulu oonombombiya kwimiqobo eyahlukeneyo kunye neengozi, befuna ukhuseleko lwabo. Lo ngumdlalo wephazili we-Limmings-style classic. Kuza nenqanaba elincinci lamanqanaba okudlala kwaye kuya kusivumela ukuba senze awethu amanqanaba sisebenzisa umhleli owakhelweyo. Umdlalo ukhutshwa phantsi kwelayisensi ye-GNU GPL.
IPingus ngumdlalo yenziwe ngu-Ingo Ruhnke kwaye iphefumlelwe ngumdlalo othandwayo weLimmings. Le nguqulo ithathe indawo yeelemings kunye noonombombiya abanjengoTux. Uphuhliso lwayo lwaqala ngo-1998. Onke amanqanaba anomxholo wasebusika, umdlalo opheleleyo, kunye nomculo kunye nezandi.
I-Pingus yaqala ngenjongo elula yokudala iklone yasimahla yeeLimings. Umyili wayo unikezela wonke umntu onokuba nomdla kuyo yonke into awayeyisebenzisa ukwenza lo mdlalo. Kuyo yonke iminyaka yayo, le projekthi ikhule kakuhle ngaphezulu kwenjongo yoqobo kwaye iye yaba ngaphezulu kweklone, njenge Inemifanekiso yoqobo, umhleli wenqanaba elakhelweyo, iintshukumo ezintsha, ukhetho lwabadlali abaninzi kunye nezinye izinto. Umdlalo ukhona kuphela kulwimi lwesiNgesi lwantlandlolo.
Lo mdlalo usekelwe kwinkqubo yephazili. Injongo ekufuneka ilandelwe kukukhokela uthotho lweephengwini ukusuka kwindawo yokuqala ukuya kuthotho lwemiqobo eya kwi-igloo. Kwinqanaba ngalinye kukho uthotho lweengxaki ekufuneka oonombombiya boyise. Umdlali uya kuwubona umdlalo ecaleni, kwaye akazukulawula ukuhamba kweephengwini, kodwa unokunika imiyalelo efana nokwakha ibhulorho, ukumba okanye ukutsiba kunombombiya athe wagqiba. Kuxhomekeka kwinqanaba, umdlali anganika uhlobo olunye okanye enye yee-odolo, kodwa uya kuba nenani eliqingqiweyo labo. Xa umdlali enganikeli imisebenzi koonombombiya, baya kuhlala behamba phambili.
Ngexesha lokuphuhliswa komdlalo, umdlali uya kudlula kuthotho lweziqithi, nganye nganye kuya kubakho imishini ekufuneka ayigqibile umdlali ukuze aqhubeke nokuqhubela phambili. Umdlalo uza kuqala eMogork Island, apho singadlala khona isifundo ukuze siqonde indlela yokudlala.
Umdlali kuya kufuneka eze nesicwangciso sokugcina oonombombiya abaninzi kangangoko kunokwenzeka, nangona ngamanye amaxesha kuyakufuneka ukuncama ezinye.
1 Faka umdlalo wePingus ku-Ubuntu
1.1 Khupha ngaphandle
Faka umdlalo wePingus ku-Ubuntu
IPingus sinokuyifumana ifumaneka njenge ipakethe yeplppak Ubuntu. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye awunayo le teknoloji yenziwe kwikhompyuter yakho, unokulandela isikhokelo esabhalwa ngumntu osebenza naye kwithuba elidlulileyo ngendlela Yenza inkxaso yeflppak ku-Ubuntu 20.04.
Xa unokufaka iiphakheji zeplppak kwikhompyuter yakho, uya kufuna kuphela vula itheminali (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise lo mthetho ulandelayo wokufaka kuwo:
Lo myalelo uza kufaka ingxelo yokugqibela epapashiweyo yomdlalo kwinkqubo yethu. Nje ukuba ukufakwa kugqityiwe, kuya kufuneka sijonge isiqalisi kwikhompyuter yethu.
Sinokuvula kwakhona i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye senze umthetho kuyo:
Siza kuba nakho ukususa lo mdlalo ufakwe njengephakeji yeflakpak, Ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokwenza umyalelo kuyo:
flatpak uninstall org.seul.pingus
Nangona uPingus esekwe kumbono weeLemings, umyili wayo ubonakalisa ukuba akazami ukuba lilo ngqo. Kumdlalo wafaka ezinye zezimvo zakhe ezinje ngemephu yehlabathi okanye amanqanaba ayimfihlo. Oku kunokuqhelana nemidlalo yeSuper Mario yeHlabathi kunye neminye imidlalo yeNintendo.
Ukufumana umbono ongcono ngenkangeleko nokudlalwa kwePingus, kungcono uzame, dibana ne- iwebhusayithi yeprojekthi okanye yakhe Indawo yokugcina kwiGitHub.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » I-Pingus, umdlalo we-Lemmings-style ukuze ube nexesha elihle
I-FreeOffice 7.1.3 ifika ngokulungiswa kwe-bug kunye nenkxaso yokuqala yeWebhu ye-AsAs